Umhlahlandlela we-7 Card Stud Poker yase Ningizimu Africa
Ikhaya / Imihlahlandlela / i-7 khadi stud poker
I-7 Khadi Stud Poker
Uyemukelwa kumhlahlandlela wethu womdlalo we-7 Card Stud Poker. I-Seven Card Stud Poker ngumdlalo wamasu obandakanya ukuqeqeshwa okuhle futhi udinga abadlali abakwaziyo ukubheka imiqondo eminingi ngasikhathi sinye. Kunzima kakhulu ukuhlaziya kune Texas Hold ’em poker ngoba inemijikelezo ewu-5 yokubheja, esikhundleni se-4.
Ungawufunda kanjani lo mhlahlandlela
Lo mhlahlandlela we-7 Card Stud Poker uyisiqondiso esivamile. Abadlali be-poker abaphumelelayo bayakwazi ukusebenzisa ukwahlulela kwabo futhi benze okuhlukile ukunquma uhlelo olungcono kakhulu lokusebenza. Okungasebenza esimeni esisodwa kungahle kungasebenzi kokulandelayo.
Bheka I-Poker Directory Yethu eku inthanethi
Imihlahlandlela ye-7 Card Stud Poker:
Ungayikhetha kanjani itafula – kungcono ukudlala etafuleni labadlali abahlanganisiwe futhi lapho uzoba nomphetho. Musa ukujoyina i-all-pro table uma usafunda, abadlali abambalwa ababuthakathaka bazokwenza kube lula ukuwina.
Khetha lapho ukhetha isandla sakho sokuqala – isandla sakho sokuqala ithuluzi lakho elibaluleke kakhulu lokuqala umdlalo ngonyawo oluhle.
Dlala abadlali – khulisa abaphikisi ngokushesha okukhulu. Bheka abadlali abasonga noma isiphi isibonakaliso sodlame, abavame ukudlala izandla ezinganakiwe, ababiza izandla ezibuthakathaka, ababhejayo ngokudonsa, ngubani onamahloni futhi ongaxoshwa, njll.
Phakamisa lapho udrawa ngokuqinile. Kungumqondo omuhle ukuphakamisa esikhundleni sokumane ushaye ucingo noma kunini lapho uthola ukudrawa okuhle noma okungcono, njenge-4-flush ku-4th Street. Lesi sinqumo singadala ukuthi umphikisi wakho abeke phansi isandla esingcono futhi akushiye usale udrawa ngokuqinile.
Khumbula amakhadi akho aphezulu – bheka amakhadi wakho we-7 Card Stud Poker womphikisi wakho bese uzama ukuwakhumbula. Kuhlala kubalulekile ukwazi ukuthi izandla zabo ziyaphila noma cha.
Yipompa noma uyilahle – kufanele uthathe isinyathelo ngokushesha ukusonga, ukubheja, noma ukuphakamisa lapho amathuba akuvuma noma aphikisana nawe. Musa nje ukufona ngaphandle uma unesizathu esihle sokwenza kanjalo.
Uyemukelwa kumhlahlandlela wethu womdlalo we-7 Card Stud Poker. I-Seven Card Stud Poker ngumdlalo wamasu obandakanya ukuqeqeshwa okuhle kanye nekhono, futhi idinga abadlali abakwaziyo ukubheka imiqondo eminingi ngasikhathi sinye. Kunzima kakhulu ukuhlaziya kune-Texas Hold’em poker ngoba inemijikelezo emi-5 yokubheja, esikhundleni se-4.